Bịa na Dubai! | Ọrụ - Nlekọta - Njem njem gị na - azụ ahịa - Bụrụ uru
Ziga CV n'efu!
Bịa na Dubai!
A maara Dubai dị ka obodo nke azụmahịa
Nwere ike 25, 2019
Nwere ike 26, 2019
Bịa na Dubai, Na UAE, anyị nwere ike ijide n'aka kpọbata gị n’ọrụ ọhụrụ, ọ bụrụ na ị bụ onye bịara ọhụrụ. Na, anyị nwere ike ịkwalite ọrụ gị, ma ọ bụrụ na ị nọ na ya maka imeziwanye nkà gị na ime ka ọrụ gị ka mma. Anyị nwekwara ike inyere gị aka ịme oke mmetụta na njedebe nke ọrụ gị ma nwee ike ịchọta azụmahịa ị nwere ike ịnụ ụtọ ịme ọmarịcha ma ọ bụ isoro ya rụọ ọrụ n'oge udo kachasị nke ndụ gị.
Emirates nwere ike ime ya! Anyị nwere ike ịnyere gị aka n'ihi na anyị agawo ma gafee njem niile ọsụsọ na ndị isi ike ọrụ nke mere ka obodo anyị bụrụ obodo ịtụnanya ọ bụ taa. Sonyere anyi na Emirates: ọnụ ụzọ mgbanwe!
Zitere anyị CV gị
Ka anyị soro na ya. Anyị na UAE- nọ ebe ahụ iji mee ka ị tinye ọrụ nke bara uru nye gị. Zipu CV gị na DCC Ka anyị bido otu ahụ n'otu oge - njem na-adịgide adịgide gaa nke ọma gị, na nke anyị oge niile.
Mee ka azụmahịa gị baa uru
Nrọ adighi akwusi mgbe i toro: amam-ihe diri. Nrọ di ezigbo ebumnuche dika gi kwalite ọrụ gị oge niile. Nhọrọ anyị dị ukwuu nwere ike ime ka ị gaa n'ụzọ doro anya karịa. Ka anyị rụgharịa ndụ azụmaahịa gị.
Jiri nke anyị ahụmịhe siri ike n’afọ niile dịka nke a bụ otu n’ime ọtụtụ uru anyị bara na UAE. Anyị malitere site na ọkọ, weta ihe na ndụ wee gawa karia inyocha ala ohuru. Anyị na-adị njikere mgbe niile ịkọrọ gị ihe ọmụma anyị.
"Chọpụta ọtụtụ nhọrọ ndị na-eme ka ọrụ gị dịkwuo ụtọ. Tinye taa! "
The Companylọ ọrụ obodo na-enye aka maka expats. Anyị na-atụ anya inyere gị aka inweta ozi gbasara ọrụ a na-enye anyị na anyị na-enye ozi gbasara Obodo anyị dị ịtụnanya.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ị banye na Emiratesdownload
Bulite CV na Dubai - https://www.dubaicitycompany.com/upload-resume/
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na UAE eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.
Turkey Expats na UAE
Njikọ Ime - Peeji kachasị mma anyị!
100% ọrụ siri ike na Dubai (2)
رقص با اوب (1)
Ọrụ dị iche iche na whatsapp (1)
ভিসা ২০১৯ (1)
Ọrụ dị na dubai maka ndị mba ọzọ 2020 (1)
Kedu ihe dị mfe.jobs dị na dubai maka ndị India (1)
Ọrụ nkuzi ọhụụ na Dubai (1)
Copyright © 2020 Dubai City Company. Ikike niile echekwabara
N'efu - Nweta ohere gi merie Job na Dubai!
Bulite malitegharịa - Maka Ọrụ Ọhụrụ!
Debanye aha CV na UAE!